Leica Geosystems waxay soo bandhigaysaa qalab cusub oo lagu qaado xogta dusha sare - Geofumadas
Leica Geosystems waxay soo bandhigaysaa qalab cusub oo lagu hirgelinayo xogta shaxda
Abriil, 2019 GPS / Qalabka, topografia
Heerbrugg, ISWIISKA, APRIL 10 2019 - Leica Geosystems, qayb ka mid ah lixgeesle, ayaa maanta ku dhawaaqay barnaamijka of qalab cusub in lagu soo qabto geedi socodka, Tusaale iyo design, Leica iCON iCT30 si ay u siiso waxtar dheeraad ah warshadaha dhismaha.
icon iCT30 qalab The, oo ay weheliso software dhismaha Leica icon waa u fududahay ah si ay u isticmaalaan oo la awoodi karo in la kordhiyo wax soo saarka by yareeyo waqtiga shaqada iyo qalad, halka fududeynta Hawlaha ugu muhiimsan ee raad macluumaad. ICT30 cusub ayaa ah qalab diirada saaraya isticmaalaha isticmaala jadwalka si loo qabsado oo looga qayb galiyo xogta geedi socodka dhismaha.
"Leica iCON iCT30 waxaa loogu talagalay dadka isticmaala waa inay ka guuraan nidaamka sahaminta iyo qaababka dhismaha ee loo yaqaan" workflows ". Qalabka iyo software-ka waa sahlan tahay in la isticmaalo, "ayuu yiri Shane O'Regan, khabiirka Leica iCON ee Leica Geosystems. "Qalabkan cusub wuxuu qayb ka yahay khariidada iCON ee dhismaha dhismaha, waxaana lagu dhex darayaa barnaamijka iCon ee loogu talagalay dhismaha, kaas oo bixiya adeegsi la isku-rogo oo si buuxda loogu qaabeeyo qaababka .IFC."
Noocyada diirada saara wax soo saar weyn.
Xakameynta aragtida teleskoobka waa mid fudud, kalsoonida la isku halleyn karo iyo hawlgalka qof kaliya ayaa ah qaar ka mid ah sifooyinka kala duwan ee qalabka iCT30. Waa aalad si degdeg ah oo adag in shaqeyn karto jeer xornimada tamarta weyn, shaqeyn karaan xaaladaha goobta adag, sida shakhi, Goynta laynka hortiisa ama congestions. Iyadoo iCT30, macmiilayaashu waxay qabsan doonaan dhibco badan maalintii, iyagoo dardargelinaya geeddi-socodka dhismaha ee ku xidhan natiijooyinka sawir-qaadashada.
Leica iCON iCT30 cusub ayaa laga bilaabi doonaa BAUMA ee Munich, Jarmalka. Wixii bandhigyo wax ku ool ah, booqo Hexagon gudaha A2 Hall, Stand 137.
Wixii macluumaad dheeraad ah ee taxanaha cusub ee qalabka dhismaha, booqo https://leica-geosystems.com/en-GB/products/construction-tps-and-gnss/leica-icon-ict-30
Leica Geosyoosyada - markay tahay inay sax noqoto
Hexagon waa hoggaamiye caalami ah oo xeel dheer oo dijital ah oo abuuraya nidaamyo isku dhafan oo dhexdhexaad ah (ACEs). Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B) waxay qiyaastii shaqaale 20,000 ku leedahay dalalka 50 iyo iibka netka ah ee ku dhowaad 3.8 trillion euro. Hesho macluumaad dheeri ah oo ku saabsan hexagon.com oo na soo raac @HexagonAB.
Taleefan: + 41 41 727 8960
Post Previous«Previous Maxay tahay ballanqaadkii casinos ee noqda shirkado waari kara
Post Next Bentley Systems waxay magacawday Dr. Nabil Abou-Rahme oo ah Agaasimaha Cilmi baaristaNext »